မိုးတှရေယျ အတှေးတှရေယျ ပွီးတော့ အလှမျးတှရေယျ …. - ONE DAILY MEDIA
ကောငျးကငျကို မော့ကွညျ့တော့ ရငျထဲကလိုပဲ မှိုငျးလို့ မညျးလို့မသာယာလှဘူး စိတျထဲမှာလဲ မှိုငျးလို့ မညျးလို့သိပျပွီး မပြျောလှဘူး … ပတျဝနျးကငျြကို ငေးကွညျ့တော့လဲ အရာရာဟာ တိတျဆိတျပွီး ငွီးငှနေ့သေလို ဒါမှမဟုတျ ပငျြးရိနသေလို ဒီနဟေ့ာ သိပျတော့ မတကျကွှခဲ့ဘူး … ပွီးတော့ တဖြောကျဖြောကျနဲ့ မိုးလေးတှေ ကတြယျ …
အဲ့ဒီ မိုးသံတှနေဲ့အတူ မထေ့ားတာ အတျောကွာပွီဖွဈတဲ့ အတှေးတှဟောလဲ တဖွေးဖွေးခေါငျးထဲ ပျေါလာခဲ့တယျ မိုးတှရှောရငျ ဘာကွောငျ့မြား အတှေးတှကေ ထိနျးမရတာလဲ ဘာကွောငျ့ လူက ဆှေးရတာလဲ အဖွမေသိခဲ့ပမေယျ့ ဒီနေ့ မိုးတှရှောတော့ မနညျးမထေ့ားတဲ့ သူ့အကွောငျးတှကေို တှေးဖွဈတယျ ပွီးတော့ လှမျးဖွဈတယျ ။
သူဆိုတာ လှနျခဲ့တဲ့ နှဈတှကေတညျးက ခဈြခဲ့ရတဲ့သူလေ နောကျတဈခုထပျပွီး ဝနျခံရရငျ ဒီနဒေီ့အခြိနျထိလဲ ခဈြနသေေးတယျ ဒါပမေယျ့ အရငျတုနျးကတော့ သူနဲ့ ဆိုငျခဲ့ဖူးတယျ ခုတော့ ဆိုငျလဲမဆိုငျတော့ပါဘူး တခြိနျတုနျးက တှခေဲ့ဖူးတယျဆိုတာလောကျပဲ ပွောလို့ရတော့မယျ သူစိမျးတဈယောကျပါ ဒါပမေယျ့ မဆိုငျတဲ့သူကို ရှာနတေဲ့မိုးတှေ အကွောငျးပွပွီး ဒီနတေ့ော့ လှမျးဖွဈသေးတယျ …
ဒီအခြိနျ ဘာလုပျနမေလဲဆိုတဲ့ အတှေးနဲ့ အဆငျပွနေမှောပါဆိုပွီး ဖွလေိုကျတဲ့ အတှေးတှနေောကျမှာ သကျပွငျးတဈခကျြ ခမြိတယျ … ဘယျသူနဲ့ ရှိနမေလဲဆိုပွီးတောငျ မဆိုငျပဲ တှေးဖွဈသှားသေးတယျ ပွတငျးပေါကျနားကပျ ရှာနတေဲ့မိုးကို အနီးကပျလေး ခံစားကွညျ့ရငျ မထိတထိ လာထိတဲ့ မိုးရတှေနေဲ့ အတူ ငိုမိသေးတယျ ..
မိုးတှေ ညိုနရေငျ ကျောဖီလေးတဈခှကျ စာအုပျလေးတဈဖကျနဲ့ပဲ ဘာမှ မတှေးနဲ့ပဲ ရငျ့ကကျြခငျြတယျ … ဒီနတေ့ော့ မိုးတှရေယျ အတှေးတှရေယျ နဲ့ သူ့ကို လှမျးဖွဈခဲ့သေးတယျ ။
မိုးတွေရယ် အတွေးတွေရယ် ပြီးတော့ အလွမ်းတွေရယ် ….
ကောင်းကင်ကို မော့ကြည့်တော့ ရင်ထဲကလိုပဲ မှိုင်းလို့ မည်းလို့ မသာယာလှဘူး စိတ်ထဲမှာလဲ မှိုင်းလို့ မည်းလို့ သိပ်ပြီး မပျော်လှဘူး … ပတ်ဝန်းကျင်ကို ငေးကြည့်တော့လဲ အရာရာဟာ တိတ်ဆိတ်ပြီး ငြီးငွေ့နေသလို ဒါမှမဟုတ် ပျင်းရိနေသလို ဒီနေ့ဟာ သိပ်တော့ မတက်ကြွခဲ့ဘူး … ပြီးတော့ တဖျောက်ဖျောက်နဲ့ မိုးလေးတွေ ကျတယ် …
အဲ့ဒီ မိုးသံတွေနဲ့အတူ မေ့ထားတာ အတော်ကြာပြီဖြစ်တဲ့ အတွေးတွေဟာလဲ တဖြေးဖြေးခေါင်းထဲ ပေါ်လာခဲ့တယ် မိုးတွေရွာရင် ဘာကြောင့်များ အတွေးတွေက ထိန်းမရတာလဲ ဘာကြောင့် လူက ဆွေးရတာလဲ အဖြေမသိခဲ့ပေမယ့် ဒီနေ့ မိုးတွေရွာတော့ မနည်းမေ့ထားတဲ့ သူ့အကြောင်းတွေကို တွေးဖြစ်တယ် ပြီးတော့ လွမ်းဖြစ်တယ် ။
သူဆိုတာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်တွေကတည်းက ချစ်ခဲ့ရတဲ့သူလေ နောက်တစ်ခုထပ်ပြီး ၀န်ခံရရင် ဒီနေ့ဒီအချိန်ထိလဲ ချစ်နေသေးတယ် ဒါပေမယ့် အရင်တုန်းကတော့ သူနဲ့ ဆိုင်ခဲ့ဖူးတယ် ခုတော့ ဆိုင်လဲမဆိုင်တော့ပါဘူး တချိန်တုန်းက တွေ့ခဲ့ဖူးတယ်ဆိုတာလောက်ပဲ ပြောလို့ရတော့မယ် သူစိမ်းတစ်ယောက်ပါ ဒါပေမယ့် မဆိုင်တဲ့သူကို ရွာနေတဲ့မိုးတွေ အကြောင်းပြပြီး ဒီနေ့တော့ လွမ်းဖြစ်သေးတယ် …
ဒီအချိန် ဘာလုပ်နေမလဲဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ အဆင်ပြေနေမှာပါဆိုပြီး ဖြေလိုက်တဲ့ အတွေးတွေနောက်မှာ သက်ပြင်းတစ်ချက် ချမိတယ် … ဘယ်သူနဲ့ ရှိနေမလဲဆိုပြီးတောင် မဆိုင်ပဲ တွေးဖြစ်သွားသေးတယ် ပြတင်းပေါက်နားကပ် ရွာနေတဲ့မိုးကို အနီးကပ်လေး ခံစားကြည့်ရင် မထိတထိ လာထိတဲ့ မိုးရေတွေနဲ့ အတူ ငိုမိသေးတယ် ..
မိုးတွေ ညိုနေရင် ကော်ဖီိလေးတစ်ခွက် စာအုပ်လေးတစ်ဖက်နဲ့ပဲ ဘာမှ မတွေးနဲ့ပဲ ရင့်ကျက်ချင်တယ် … ဒီနေ့တော့ မိုးတွေရယ် အတွေးတွေရယ် နဲ့ သူ့ကို လွမ်းဖြစ်ခဲ့သေးတယ် ။
ခဏအလညျလာတဲ့သူကို တဈဘစာတှယျတာမိသူက အသညျးတှကှေဲရတယျ …